Kooxdayada - Drotrong Chinese Herbs Biotech Co., Ltd.
Alaabooyinka Daryeelka Caafimaadka
Maareeyaha Iibka: Monica Wang
Bajlar Degree, weyna ahaa Ingiriis ganacsi, wuxuu leeyahay shahaadooyinka sare ee Cambridge BEC, Ingiriisi aad u yaqaan, khibrad 11 sano ah oo ganacsiga caalamiga ah.Waxay aqoon u leedahay habka ganacsiga ganacsiga dibadda waxayna ku fiican tahay la xiriirka macaamiisha.Waxay si fiican u fahansan tahay agabka daawaynta ee Shiinaha, waxayna si dhakhso ah u fahmi kartaa suuqa.
Maamulaha Saldhigga Dhirta
30 sano oo waayo-aragnimo ah beerista, tan iyo markii shirkadeena aasaasay saldhigga beeritaanka, waxa uu mas'uul ka ahaa abaabulka wax soo saarka ee saldhigga beerto, kormeerida habaynta iyo hirgelinta qorshaha wax soo saarka, hanashada koritaanka dhirta Chinese kala duwan.
Maamulaha wax soo saarka: Eric Xie
In ka badan siddeed sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan soo saarista alaabta dawooyinka ee Shiinaha iyo cuntada caafimaadka, oo daabacday dhowr joornaal oo ku saabsan sida loo hagaajiyo waxtarka wax soo saarka.Wuxuu mas'uul ka yahay maamulka shaqaalaha, wax soo saarka, qalabka iyo badbaadada.
Maareeyaha R&D: Yiling He
9 sano oo waayo-aragnimo ah qalabka dawooyinka Shiinaha ee R&D, Daraasad ku saabsan tignoolajiyada ka-hortagga ee xabbad-joojinta daawada Shiinaha iyo diyaarinta qaybaha decoction-ka.Waxay hogaamisaa kooxda inay si joogto ah u horumariyaan alaabada cusub ee daryeelka caafimaadka.
Waxa uu leeyahay Shahaadada Kormeerka.In lagu sameeyo kormeer warshadeed dhammaan alaabta ceeriin ee shirkadeena si loo hubiyo in alaabta ceeriin ee soo galaysa wax soo saarka iyo habaynta ay yihiin alaab tayo leh.Samee diiwaannada kormeerka oo samee warbixinta hubinta tayada si aad u hubiso in kaliya alaabta tayada leh.
Isdiiwaangeli si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka (xayaysiimaha, alaabada cusub iwm.)